Manchester City oo ku guuleystey FA cup-ka 35 sano ka dib oo koob la'aan ah (Sawiro) – SBC
Manchester City oo ku guuleystey FA cup-ka 35 sano ka dib oo koob la'aan ah (Sawiro)
Posted by editor on May 14, 2011 Comments
Ka dib maalgalintii ugu badneyd ee sanadkii hore lagu sameeyo koox kubada cagta ayaa Manchester City waxay gaartey himiladii maalqabeenada Carbeed ay maalgaliyeen kooxdan reer England, iyagoo maanta gaaray riyadoodii ka dib 35 sano oo gool la’aan ah. Mulkiilaha kooxda Man City Sheik Mansour markii uu la wareegay kooxda wuxuu ka dhigay kooxdan mid ka mid ah kooxaha ugu hantida badan aduunka, waxaana uu gakliyey lacag ku dhaw 500 milyan oo doolar.
Ciyaaryahanka Muslimka ah ee ka soo jeeda wadanka Ivory Coast Yaya Toure ayaa maanta noqdey boqorka Man City ka dib markii uu u xaqiijiyey goolkii guusha ee ay ku hanatey koobka FA-ga.
Yaya Toure oo todobaadkii mushaar ahaan u qaata 300 kun oo doolar wuxuu ka helay kubad soo laalabatey oo silic badan soo martey taasi oo uu ku dhexjirtey goosha Stoke City wuxuuna si caaqibo leh ugu hubsadey shabaqa.
Goolkaasi ka fujiyey Man City ee keenay taariikhda cusub wuxuu dhinaca kale ka ahaa gool lumiyey rajadii Stoke City oo final-kan timid iyadoo raadinaysa koobka FA-ga mudo 148 sano.
City waxay ku guuleystey koobka FA-ga sanadkii 1969-kii laakiin Stoke City walieed ma aanay dhifan koobkan oo ah koobka tartan ee aduunka ugu faca weyn, kaasi oo markii ugu horeysay la ciyaaray sanadkii 1871-dii.